အခမဲ့များအတွက် Chrome ကို Browser ကို | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Chrome က Browser ကို
Chrome က Browser ကို APK ကို
သငျသညျ Desktop ပေါ်မှာကိုချစ်ကို Google က Chrome browser ကိုနှင့်အတူသင့်ရဲ့ Android ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်အပေါ်အစာရှောင်ခြင်း Browse ။ browsing နေချိန်မှာသင် tab ကိုထပ်တူပြုခြင်း, အသံအားဖြင့်ရှာဖွေရေးနှင့်သင်၏အခြားထုတ်ကုန်များပေါ်မှာချွတ် left ဘယ်မှာတက် Pick နှင့်ဒေတာအသုံးပြုမှု၏ 50% အထိသိမ်းဆည်းပါ။ • ဖုန်းအတွက်တစ်ဝှမ်း Sync ကို - ချောမွေ့စွာသင့်ရဲ့လက်ပ်တော့, ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုထံမှရယူနှင့်ပွင့်လင်း tabs များနှင့် bookmarks ကို
• ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်မှာ Data - browsing စဉ်အထိ 50% အားဖြင့်မိုဘိုင်းဒေတာအသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချ
• ပိုမိုမြန်ဆန် Browsing - သင်ရိုက်လျင်မြန်စွာယခင်ကသွားရောက်လည်ပတ်စာမကျြနှာကိုဝင်ရောက်အဖြစ်ချက်ချင်းပေါ်လာကြောင်း search results မှရှေးခယျြ
• Voice ကိုရှာရန် - စာရိုက်ခြင်းမရှိဘဲ on-the-go အဖြေတွေကိုရှာတွေ့မှ Google အသံရှာဖွေရေး၏ပဉ္စလက်ကိုသုံးပါ
• ဘာသာပြန် - အလွယ်တကူမဆိုဘာသာစကားမှာကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဖတ်ပါ
• အလိုလိုဟနျအမူအရာ - သင့်နှလုံးအလိုဆန္ဒများအတိုင်းအများအပြား tabs များဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်လျှင်မြန်စွာ toolbar ကိုအပေါ်ဘက်ခြမ်းကနေပွတ်ဆွဲခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုရှောက်လှန်
• သီးသန့်လုံခြုံရေး - သင့်သမိုင်းချွေတာခြင်းမရှိဘဲ browse ဖို့ရုပ်ဖျက်မုဒ်ကိုသုံးပါ
Chrome browser မှာ open source app ကိုလား?
Chrome browser app ကိုခရိုမီယမ်အပေါ်အခြေခံသည်။ သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံး version ကိုကတည်းက၎င်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများအားလုံး Source ပွင့်လင်းခဲ့ကြပြီ။ သငျသညျက Android အတွက် Chrome အပေါ်အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများကိုတညျဆောကျနိုငျသညျ။
PC အတွက် Android နဲ့ Chrome ဘရောက်ဇာအတွက် Chrome အကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ?
သငျသညျ Desktop ပေါ်မှာ Android နဲ့ Chrome အတွက်က Chrome အတွက်, လုံခြုံအစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံ browsing အတွက်အတှေ့အကွုံရှိနိုင်ပါသည်။ ခြုံငုံအညွှန်းနှင့် tabs များအပေါ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှုရှိပါသည်။ Android အတွက် Chrome ကိုအားလုံး devices များအတွက်စိတ်ကြိုက်, စုစည်းအတွေ့အကြုံကိုပေးစွမ်းသည်။
ငါအလိုအလျှောက် update လုပ်ဖို့ Chrome ကိုမသတ်မှတ်နိုင်ပါသလား?
သငျသညျကို Chrome Auto-update ကိုအောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Auto-update များသို့မဟုတ်အန်းဒရွိုက်အတွက် setting နှုန်း-app ကို update ကိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
Chrome ကိုကို web သို့မဟုတ်ဇာတိ app ကိုများအတွက် Android ကိုထောက်ခံမှုဝက်ဘ်မြင်ကွင်းအဘို့အလော
Chrome ကိုအကြာတွင်အန်းဒရွိုက် 4.4 (KitKat ကို) သို့မဟုတ်ပေါ်ဝက်ဘ်မြင်ကွင်းထောက်ခံပါတယ်။ ပိုပြီးအသေးစိတ်အတွက် Web ကိုကြည့်ရန်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကိုကိုးကား။
Android အတွက် Chrome မှာထောက်ခံ extension များနှင့် app များကိုရှိပါသလား
လောလောဆယ်က Android အတွက် Chrome Chrome က apps များနှင့် extension များကိုထောက်ပံ့မပေးပါဘူး။
ငါသည်ငါ့မိုဘိုင်းဝက်ဘ်စာမျက်နှာ Debugging မှအဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်း
Android အတွက် Chrome ကိုသုံးနေစဉ်သင်ကဝေးလံခေါင်သီဒီဘာဂင်အတွက် Chrome ပြုစုသူကိရိယာများကိုသုံးနိုင်သည်။
ကလုံလုံခြုံခြုံနဲ့သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူသည်အဖြစ် Google Chrome ကို Android နဲ့ desktop ပေါ်မှာများအတွက်အကောင်းဆုံး web browser ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအလွယ်တကူအများအပြား devices တွေကိုကျော်သင့်စာညှပ်များနှင့်ဦးစားပေးတွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Chrome ကို 57 အတွက်နယူး:
ပွင့်လင်းဝဘ်စာမျက်နှာများကို Chrome ကိုသုံးပြီးကြောင်း apps များရရှိနိုင် "စာမျက်နှာများတွင်ရှာပါ" ကဲ့သို့•အသုံးဝင်သောလုပ်ရပ်များ
•ပိုမကြာခဏသစ် Tab ကိုစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဆောင်းပါးအကြံပြုချက်များ updated
•သင့်က default ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဖြစ်မကြာသေးမီကသွားရောက်ခဲ့ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုအသုံးပြုပါ
Chrome က Browser ကို - Google က
45.74 ကို MB
အကောင်းဆုံး web browser ...
လျှပ်စီး Browser …
WADA Browser ကို
NoxBrowser - မြန် ...
အော်ပရာ Browser ကိုသင်ခန်းစာ
Surfy Browser -
Chrome က Browser ကို Chrome က Browser ကို APK ကို Chrome က Browser ကို App ကိုဒေါင်းလုပ် Android အတွက် Chrome ကို Browser ကို ဒေါင်းလုပ် Chrome ကို Chrome က Browser ကို Download လုပ်ပါ web browser
အောက်တိုဘာလ 4, 2019 မှာ 8: 19 နံနက်
ဟုတ်ကဲ့၊ chrome remote desktop ကကောင်းတယ်။ သို့သော်မကြာသေးမီကအခြားကောင်းမွန်သောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် - R-HUB remote support servers ။ ၎င်းသည် ၀ င်းဒိုး၊ MAC၊ Android၊ iOS စသည်တို့တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ လက်ခံထားသောဝန်ဆောင်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ကြိမ်သာကုန်ကျနိုင်သည်
မတ်လ 15, 2018 မှာ 9: 29 ညနေ
ဒီ app ကောင်းတစ်ဦးတည်းဖြစ်ထွက်လှည့်ပုံပါဘဲ။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 19, 2018 မှာ 6: 40 နံနက်
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် nice app ကို
ရှငျဘုရငျသ jiva says:
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 4, 2018 မှာ 12: 02 ညနေ
ဒေါင်းလုပ်ရှိပေမယ့်ကိုယ့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ၏အ device ကိုအောင်မြင်ဖို့မနိုင်မသိရပါဘူး။
ဇန်နဝါရီလ 11, 2018 မှာ 4: 19 နံနက်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 29, 2017 မှာ 7: 39 ညနေ
ငါသည်ငါ့ကို HTC Desire S ကို Android ပေါ်မှာဒေါင်းလုပ်ပြီးနောက် app ကို install လုပ်ပါပြဿနာရှိသည်။
နိုဝင်ဘာလ 24, 2017 မှာ 4: 57 နံနက်
Prasanta deb Nath says:
ဇူလိုင်လ 20, 2017 မှာ 8: 16 ညနေ
ဇူလိုင်လ 13, 2017 မှာ 12: 20 နံနက်
ဒီအကောင်းဆုံး application ဖြစ်ပါတယ်
Mahmud မိုဟာမက် says:
ဇူလိုင်လ 6, 2017 မှာ 1: 29 နံနက်
ငါကို download လုပ်ရန်ကြိုးစားပေမယ့်ငါ့စက်ကိုအဘယ်ကြောင့်မသိကြောင်းတုန့်ပြန်သလဲ
ဇူလိုင်လ 9, 2017 မှာ 7: 28 ညနေ
Christy az says:
ဇူလိုင်လ 1, 2017 မှာ 3: 23 ညနေ
Kelvin Ekeh says:
ဇွန်လ 17, 2017 မှာ 7: 07 ညနေ
ကိုယ့်ကြောင့် loading ငါ
မေလ 14, 2017 မှာ 12: 57 ညနေ
ဧပြီလ 12, 2017 မှာ 4: 18 ညနေ
အခုကဒေါင်းလုပ်ဆွဲနေပါတယ် ... ယင်း၏ Gud HP
ဇွန်လ 13, 2017 မှာ 5: 35 နံနက်
အိုဟုတ်တယ်ငါဒီ app ကိုသုံးပြီးနေပါတယ်။